दोस्री छोरी नचाहेका दम्पत्तीले दुई महिने छोरीको विष खुवाएर हत्या | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार दोस्री छोरी नचाहेका दम्पत्तीले दुई महिने छोरीको विष खुवाएर हत्या
२०७५, २८ मंसिर शुक्रबार २२:५९
कारण ? उनीहरुलाई कान्छी छोरी चाहिएको थिएन । गत अक्टोबर चार तारिखमा छोरी अत्यधिक रोएपछि जोडीले बालिकालाई अस्पताल पनि पुर्याए तर उपचार सुरु हुनुअघि नै उनको मृत्यु भयो । अस्पतालले केही गडबडी भएको शंकामा पोस्टमार्टमअघि बालिकाको शव परिवारलाई दिन अस्विकार गर्यो । प्रकाशले अस्विकार गर्दा पनि डाक्टरले बालिकाको पोष्टमार्टम गराए । रिपोर्टमा बालिकाको अप्राकृतिक कारणले मृत्यु भएको बताइयो । बालिकाको विष सेवनपछि मृत्यु भएको उक्त रिपोर्टमा पत्ता लाग्यो ।
पुलिसले उक्त रिपोर्ट दुई महिनापछि फेला पार्यो र आमाबुवालाई शंका गरेर सोधपुछ गर्दा खानेकुरामा विष मिसाएर खुवाएको स्विकार गरे । उनीहरुले दोस्रोपटक पनि छोरी नै जन्मेको भएर हत्या गरेको पुलिसलाई जानकारी दिए ।आरोपी जोडीलाई साहुवादी पुलिसले अदालतमा पेश गरेको छ । साहुवादी–मल्कापुर अदालतले उनीहरुलाई डिसेम्बर १५ तारिखसम्म प्रहरी हिरासतमा राख्न आदेश दिएको छ ।
Previous articleताकमकोतमा हेलिकप्टर स्टाट नभएपछि….
Next articleराष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाको पहलमा वारीबेनी तटबन्धका लागि डेढ करोड बिनीयोजन